Si Aad u Xoojiso Maskaxdaada iyo Fikirkaaga Raac Tilmaamahaan Muhiimka ah | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Waddooyinka Loo Maro Guusha
Waxaad Tahay Shaqsiggii Dunidda Wax Ka Bedeli Lahaa.
Cabdijabaar Sh. Axmed, April 12, 2017
Maxamed Cabdirisaaq Diriye, February 8, 2020
Abshiro Axmed Cabdi — May 7, 2019
Si aad u xoojiso maskaxdaada iyo sirdoonka(fikarkaaga) waa inaad raacdaa dhowr tilmaamo muhiim ah:
Sidaa ognahay xanaaqa ayaa waxyeelo u geysanaya caafimaadka maskaxda isla markaana dila unugyadeeda maskaxda. halkaas oo daraasaduhu muujiyeen in kororka xanaaqa uu keenayo dhibaatooyinka xusuusta iyo maskaxda.
1- Maskaxda waxay u baahan tahay cunto joogto ah oo isku dheelitiran cuntada waxay fure u tahay shaqada habboon ee maskaxdu qabato. Noocyada cuntooyinka qaarkood si joogto ah ayaa loogu shaqeeyaa si joogto ahna waa loogu xoojiyaa unugyada maskaxda, taasoo keenaysa xasilooni iyo horuminta maskaxda.
2- Si fiican u neefso oo ka fogow sigaarka. U seexo dhinaca midig ama dhinaca dambe ee ka caawinaya neefsiga iyo maskaxda.
3- Maalin kasta maskaxdaada sii jimicsi kala duwan, gaar ahaan marka la eego tirooyinka iyo fekerka sida akhrinta sheekooyinka, qoraalka iyo ciyaarida gemamka maskaxda furfuro.
4- Naso oo sii naftaada wakhti dheeraad ah si aad uga fekerto wax badan xalna uhesho dhibaatoyinka qaara.
Tallaabooyinka lagu furfurayo maskaxda
➢ Doorashada cunno caafimaad leh oo hodan ku ah fitamiinada jidhka iyo maskaxda dhiso, iyo qaadashada cuntooyinka ay ku jiraan dufanka omega-3, kuwaas oo laga helo hilibka cad sida kalluunka, digirta, lowska.
➢ Hel hurdo kugu filan hurdo la’aanta waxay maskaxda ka dhigtaa inaysan ku shaqeynin awood buuxda, hurdadu waxay ka caawisaa in maskaxdaada ay hesho nasasho ku filan oo diiradda ku saaraanto macluumadka.
➢ Jimicsigu wuxuu kordhiyaa socodka oksijiinka maskaxda, wuxuuna caawiyaa dhiig socodka maskaxda, isaga oo gacan ka geysanaya kordhinta waxqabadka.
➢ Ka fogow walaaca iyo walbahaarka, maaddaama uu maskaxda u keeno burbur, niyad-jab. Kana fikar habka looga hortagi karo sidi adaa uga takha lusi lahayda walaaca iyo walbahaarka.
➢ Xakamaynta xanaaqa: sidaa ognahay xanaaqa ayaa waxyeelo u geysanaya caafimaadka maskaxda isla markaana dila unugyadeeda maskaxda. halkaas oo daraasaduhu muujiyeen in kororka xanaaqa uu keenayo dhibaatooyinka xusuusta iyo maskaxda.
➢ Sameynta xiriir ka dhexeeyo qoyska iyo saaxiibada kuwaas oo cilaaqaad laleh guusha qoyska iyo asxaabta ayaa ah jimicsiga ugu wanaagsan ee maskaxda ku helayso furfurnaa, sahlino karto guulo iyo hormar maskaxda iyo xasuusta ah.
Gabagabada waxaan inkaga tagayaa sheekadan. Sheeko yar oo cajiib ah.
(Marwadii Caqliga badneyd).
Nin qoraa ahaa ayaa isaga oo fadhiya qolka uu had iyo jeer wax ku qori jiryay ayuu waxu soo qaatay warqad iyo Qalin. Wuxuu qoray sannadkii aynu ka soo gudubnay waxaa la igu sameeyey qalliin weyn oo aan bilo badan. Dhakhtarka ugu jiray, oo aan Sariirta saarnaa, waxaana sannadkii hore aan gaaray 60 sanno anigoo xannuun sanaaya.
Aabahay wuxuu geeriyooday sannadkii aan ka soo gudubnay, wiil aan dhalay wuxuu ku dhacay imtixaankii uu ku qalin jabin lahaa, isla markaana ku qaadan lahaa shahaadada kuliyadda Caafimaadka, kadib markii uu waxbarashadii uga haray shil baabuur oo la soo gudboonaaday awgii.
Wuxuu warqadiisa qoraalkeedi ku soo gabagabeeyey sannad adag oo aan dhib badan la kulmay ayuu ahaa sannadkii hore ee aynu ka soo gudubnay. Warqaddii wuxuu kaga tagay miiskii uu ku qoraayey, kadib xaaskiisii ayaa soo gashay qolkii waxeyna aragtay warqadda oo miiska saaran, wayna akhrisay warqaddii uu qoray ninkeedu.
Kadib waxey soo qaadatay warqad kale, intey hadal ku qortay ayey warqadiisii hore dhigtay. Ninkii ahaa ayaa soo noqday wuxuu akhriyey warqaddii ay xaaskiisu qortay, waxaan warqada ku qornaa sidan:-
Sannadkii aynu ka soo gudubnay waxaad ka bogsootay qalliin weyn oo lagugu sameeyey, oo aad muddo dheer sariirta u saarnayd, waxaadna gaartay 60 jir adiga oo caafimaad qaba, waxaad heshiis la gashay shirkad weyn oo Buugaagta qorta si aad ugu madax banaanaatid in aad Buugaag qortid. Aabahaa wuxuu noolaa 85 sano, Muddadaa dheer wuu caafimaad qabay, qofna muusan dhibin, wuxuuna Geeriyooday isaga oo aan xanuun iyo dhibaato toona aanu ku rafaadin.
Dadna uusan dhibin. Wiilkaagu wuxuu ka badbaaday shil baabuur oo sababi lahaa in uu dhinto, wuuna caafimaaday isaga oo aan dhaawac weyn oo aan weligii ka harin ku dhicin, mana curyaamin. Waxey ku gabagabeysay Qoraalkii wuxuu ahaa sannad aynu ka soo gudubnay dhibaatooyin badan oo aanu la kulanay, Illaahay ayaa mahadaas iska leh, sidaasi darteed Allaah wuxuu inaga mudan yahay had iyo jeer inaan ku shukrino nimcooyinkiisa.
Tags: Si Aad u Xoojiso Maskaxdaada iyo Fikirkaaga Raac Tilmaamahaan Muhiimka ah
Next post Farqi Noocee ah Ayaa u Dhaxeeya Qabiilka iyo Qabyaaladda?
Previous post Nuucyada Maskaxda iyo Kobcintooda